सानो घर, एउटा साइकल, सामान्य जीवनशैली अंगालेका नागरिक जसले अर्बपतिलाई चुनावमा हराए ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/सानो घर, एउटा साइकल, सामान्य जीवनशैली अंगालेका नागरिक जसले अर्बपतिलाई चुनावमा हराए !
चुनावपछि पनि उनी झोला बोकेर उनी सामान्य नागरिक जस्तै सडकमा हिँड्छन् । सन् २००४ र सन् २००९को चुनाव पनि उनले त्यसै गरी जितेका थिए । सानो घर, एउटा साइकल उनका साथी हुन । मोदी जस्तै सन्न्यासी जीवनशैलीका कारण उनी भारतमा मात्र नभएर अहिले संसारभर चर्चामा छन्